आशाको प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना आशाको प्रार्थना
रोमी:: And र आशा लाज मान्दैन। किनभने परमेश्वरको प्रेम हामीमा भएको पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा बगाइएको छ।
जोडको उद्देश्य, र ज्ञानको एक समान अनुवाद गर्नको लागि, शब्दकोशको अर्थ र आशाको सामान्य अर्थको साथ यो लेख सुरू गर्नु उत्तम हुन्छ।
अंग्रेजीको वेबस्टर शब्दकोश अनुसार, आशा अपेक्षा र एक विशेष चीज हुन को लागी इच्छा को भावना को रूप मा परिभाषित छ। सामान्यतया, आशा एक आशावादी दिमाग राख्ने क्षमता हो जब सबै विचित्रहरू सबै भन्दा राम्रो भइरहेको बिरूद्ध छन्। आशा एक ड्राइभि force्ग शक्ति हो जसले मानिसहरूलाई बिस्तारै राख्दछ जब सबै ठीकठाक हुँदैन।
समयको क्रमसँगै, मानिसहरूले कहिलेकाँही विश्वासको लागि गलत अपेक्षा राख्छन् र यसको विपरित। यस लेखको उद्देश्यका लागि, हामी आशा र विश्वास, उनीहरूको बीचमा समानता र भिन्नताहरूको वर्णन गर्नेछौं।
यो ध्यान दिन उचित छ कि ती दुई (आशा र विश्वास) कुनै पनि व्यक्तिको आध्यात्मिक विकासको लागि अविभाज्य छन्। हिब्रू ११:११ ले विश्वासलाई आशा गरेको कुराको प्रमाणको रूपमा परिभाषित गर्दछ, नदेखिने चीजहरूको सार। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि एक व्यक्तिले ती दुई गुणहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ।
जबकि विश्वास एक व्यक्ति वा चीज मा विश्वास वा विश्वास हो वा प्रमाण मा आधारित छैन विश्वास र आशा एक आशा वा इच्छा मा आधारित दिमाग को एक आशावादी दृष्टिकोण हो। हामी देख्न सक्छौं कि दुबै जीवनको हरेक यात्रामा सँगसँगै जान्छन्।
तिनीहरू बीचको सानो फरक यो हो कि विश्वासले क्षणको कुरा गर्छन् जबकि आशाले भविष्यको बारेमा बोल्दछ।
आशाको लागि प्रार्थना गर्नु किन महत्वपूर्ण छ?
विश्वास तब हुन्छ जब एक व्यक्तिले विश्वास गर्दछ सामान्य भन्दा माथि केहि छोटो क्षणमा पनि हुन सक्छ जब सबै आशा समाप्त हुन्छ। तपाईलाई मन दिनुहोस्, विश्वासलाई कुनै खास समयमा विश्वासको खाँचो पर्दछ। अर्कोतर्फ आशा एक आशावादी भावना हो कि सबै भन्दा राम्रो बाँकी छ। कुनै पनि भविष्यवाणी सुन्ने वा कुनै दर्शन नदेखाईकन पनि हृदयमा यो विश्वस्तता, सबैको अन्त एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने आश्वासन। हामीले आशाको प्रार्थना गर्नु पर्छ किनकि आशाले हाम्रो विश्वासलाई स्थिर राख्छ।
धेरै चोटि, आशा एक चालक बल हुन सक्छ कि एक मानिस जीवित छ। दु: खकष्ट र शत्रुको बिभिन्न दुर्गुणले भरिएको संसारमा कुनै व्यक्तिको श्रम बिर्सनु, उत्तम भोलिको लागि आशाको बचत अनुग्रह हुन सक्छ जुन एक व्यक्तिले झुकाउन सक्छ। एक जना मानिसमाथिको विश्वासले नैराश्य महसुस गरे पनि मानिसमा आशा मात्र हुन्छ।
आशाको लागि प्रार्थना
रोमी १ 15:१:13 आशाका परमेश्वरले तिमीलाई विश्वासमा सबै आनन्द र शान्तिले भर्नून्, ताकि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा भरिपूर्ण होऊ।
प्रभु परमेश्वर हामीमा रमाउनुहुन्छ, तपाईंको उद्धारको शक्तिमा हामी समात्छौं, हामीलाई सताउन कहिल्यै छोड्दैनौं। जब जीवनको आँधीले हामीलाई क्रोधित बनाउँछ, जब सडक ट्राउजिंग अप्ठ्यारो हुन्छ जब तपाईं हाम्रो लागि गर्नुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा हुन असफल हुन्छन्, हामी हाँस्न चाहन्छौं भनेर सबै कुरा ठीक छ भनेर बहाना गर्न चाहन्छौं तर हामीले गर्न सक्ने सबै गहिराइ सास छ। । प्रभु, कृपया तपाईलाई आशा नबिर्सने बल दिनुहोस्।
तपाईं र तपाईं मात्र हामी हाम्रो आशामा भरोसा राख्छौं, हामी तपाईंको वचनमा उभिन्छौं, हामी पूर्णतया रगतमा निर्भर गर्दछौं जुन हाम्रो खातिर बगाइएको छ, हामीलाई कहिल्यै लाज नपर्न दिनुहोस्।
बिरामीको समयमा पनि, जब स्वास्थ्य चिकित्सकहरूको सबै निदानहरू हामी विरुद्ध हुन्छन् जब राम्रो स्वास्थ्यको सबै भविष्यवाणीहरू पूरा भएनन्। जब हामी निको हुनको लागि बिरामीलाई पनि भ break्ग गर्दछौं, जब हामी देख्छौं क्रूसमा रगतले भरिएको थियो जसरी मुक्तिदाताको निम्ति हाम्रो खातिर मारिएको थियो र निको हुन हामी टाढा छ। हे प्रभु, हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौं कि तपाईले हामीलाई सँधै आशा राख्नु भएको अनुग्रह दिनुहोस्, कि तपाईं अझै हाम्रो स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
र जब सबै समाप्त भएको देखिन्छ र अझै उपचार असफल हुन्छ, र हामी आफैले त्यो बाटो भएर गएको देख्छौं मरेका मात्र हिँड्न, कृपया हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस् तपाईंको सदाको महिमाको आशामा।
यदि विश्व यस्तो कटु छ र स्वर्गमा आराम छ भने, तब हामी विश्वासीहरूको आशालाई लाजमा पार्दैछौं। हामी तपाईं हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिताले हामीलाई येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो जसले हामीलाई अनुग्रह ल्याए जब हामी यसको योग्य छैनौं, उहाँको रगत बहाउनु भएकोमा धन्यवाद जसले हामीलाई अझ राम्रो संसारको आशा ल्यायो।
जस्तो कि धर्मशास्त्रको पुस्तक in१: in मा बताइएको छ बलियो र साहसी हुनुहोस्। तिनीहरूसित नडराऊ किनभने परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर तिमीहरूसंगै हुनु हुन्छ। उसले तिमीलाई छोड्ने छैन, छोड्ने छैन। हामीले तपाईंको यी सबै कुरा कसरी विश्वासमा राख्दछौं जब तपाईंको छोरा ख्रिस्त येशूमा हाम्रो मुक्तिको आशा गुमायौं।
हामीलाई समस्याको समयमा बलियो हुन अनुग्रह दिनुहोस्, हामीलाई सवारी गर्न बल दिनुहोस्। त्यसबेला जब यो अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा जस्तै छ, चट्टानमा कुल्किन्छ, जब हामी आफ्नो सबै भनिन लागेका सबै गुमाएजस्तो देखिन्छ, मानिसहरूले तपाईंको छोरो ख्रीष्ट येशूको अनमोल रगतले मुक्ति पाए। अझै अनुग्रह मा आशा राख्नु हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस्। एक मान्छे तपाइँसँग तपाइँको सम्बन्धको हरेक भावना हराउनेछ जब तपाइँको उसको आशा तपाइँको मृत्युको दिन, तपाइँलाई तपाइँको हाम्रो आशालाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ कि हामी यहाँ पृथ्वीमा मरे पनि हामी पछाडि संसारमा एक राम्रो स्थानको आश्वासन दिनेछौं।
क्रूसका चीजहरू नष्ट हुनेहरूका लागि मूर्खता हुन्, हो प्रभु! हामीले तपाईलाई देखेका छैनौं, तर हामीमा भावना छ कि तपाई अवस्थित हुनुहुन्छ र हामी यती शक्तिमा विश्वास गर्छौं जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनायो। हामीलाई एक पटकको लागि तपाईंको आशा कहिल्यै गुमाउँन बल दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।
अघिल्लो लेखमाएक परिणाम चालित प्रार्थना भन्नको लागि पाँच चरण
अर्को लेखमा२०२० मा तपाईंको प्रार्थना जीवन कसरी बढाउने
प्रलोभनको पछाडि प्रार्थना बिन्दुहरू
बिहानको भक्ति: यसले तपाईंलाई असन्तुष्ट गर्नेछ